Misy entana tsy ilaina ao amin'ilay rakitra PST raikitra. Ahoana ny famongorana azy ireo? - DataNumen
DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery dia natao hizaha isaky ny byte an'ny rakitra Outlook maloto ary hamerenana ny fampahalalana rehetra azo haverina, anisan'izany ireo sombin-data, lost & entana hita, ary koa ireo entana voafafa. Noho izany, ao amin'ilay rakitra PST sitrana, mety hahita hafa noho ny mailaka mahazatra ianao, misy koa ireo entana voafafa, lost & entana hita, ary koa ny singa mailaka, toy ny kambana. Ataontsika izany satria most amin'ireo mpanjifa dia mety hahita ireto entana rehetra ireto mahasoa ho azy ireo aorian'ny loza voajanahary.
Ny mailaka ara-dalàna dia averina ary averina any amin'ny lahatahiry voalohany, toa ny Inbox, Outbox, sns. Raha ny mailaka tsy ara-dalàna kosa dia hohaverina ary hohaonina ao amin'ny lahatahiry "Recovered_Groupxxx".
Raha tsy tianao ireo entana tsy mahazatra dia afaka manao toy izao manaraka izao ianao:
2. Mandehana mankany amin'ny kiheba "Safidy".
3. Kitiho ny kiheba "Advanced options" ao amin'ny tontonana havia.
4. Ao amin'ny vondrona "sitrana ireo entana voafafa", esory ny safidy rehetra.
5. Ao amin'ny vondrona "Advanced Recovery", esory ny safidy rehetra.
6. Miverena amin'ny kiheba "Fanamboarana".
7. Manamboatra indray ny PST simba /OST hametraka.
8. Sokafy ny fisie PST vaovao raikitra. Ho hitanao fa nanjavona ireo entana tsy ilaina rehetra.
raikitra ny fisie, ost, Pst, entana tsy ilaina
Navoaka tamin'ny May 16, 2021
Maninona aho no tsy mahita ireo mailaka tadiavina na zavatra hafa ao amin'ilay fisie PST raikitra?Mamolavola ny fiara aho. Mbola azoko atao ve ny mamerina ny angon-drakoko Outlook?